Akụkọ - Mkpụrụ Osisi Tea arụmọrụ
Spleen na afo
Nectar ifuru German nwere nnukwu vitamin C, mkpụrụ osisi na okooko osisi dị iche iche nwere njirimara ha. N’etiti ha, mkpụrụ vaịn na-atọ ụtọ na uto, dao dị jụụ na okike, na-edozi umeji na akụrụ, na-azụ qi na ọbara, na-akwalite mmiri mmiri, na-akwalite urination; Pọọpọ na citrus peels na-agbari nri na ume ume, na-abawanye agụụ; ifuru rose nwere uto ilu, dị jụụ na ọdịdị, na-ekpochapụ okpomọkụ na iru mmiri, na-achụpụ ifufe, na-akwalite mgbasa ọbara, ma na-edozi; rose nwere uto uto, ọdịdị dị ọkụ, na-akwalite qi ma belata ịda mba, ma belata ihe mgbu na ọbara. Mmetụta dị iche iche dị iche iche, ha niile metụtara ịhazi qi nke splin na afo.
Ifuru nectar tii nwere ike ịgwọ oyi. Ọ bụ nọ n'ọrụ vitamin C dị na tii onwe ya. Vitamin C nwere ike melite ọgụ ma wusie ahụ ike iji guzogide ọrịa. Rinụ otu iko mkpụrụ osisi tii bụ n'ezie ihe ọ drinkingụ toụ na-a drinkingụ otu iko ihe ọ juiceụ juiceụ ọhụrụ. Na Germany, ụfọdụ ndị na-ejikarị nectar ifuru eme ihe dị ka ụzọ inyeaka iji gwọọ ọrịa na ọgwụ, na-eche na ọ nwere ike belata oge ọrịa ahụ.
A na-eji mkpụrụ osisi nwere okooko osisi na tii eme ya site na mkpụrụ osisi, a na-ekwukwa na ọ nwere akụkọ ihe mere eme nke ọtụtụ narị afọ. Ndị Europe niile na-enwe mmasị ị toụ kọfị, mana maka ndị Jamanị, ifuru na tii a na-a isụ bụ akụkụ dị mkpa nke nri ha. Ọ bụghị naanị na ndị agadi German na-achọ ị drinkụ ya, mana ụmụ nwanyị German na-elekwa tii a anya dị ka ngwaahịa mara ezigbo mma.
Enwere ọtụtụ ekpomeekpo dịka Paris Champs, onye a na-achịkwaghị achịkwa, nrọ zuru oke, hibiscus na mmiri, ụdị ndị Europe, nwanyị mara mma, ọhịa ojii, mmetụta oge okpomọkụ, mmetụta bluuberi, wdg. Mkpụrụ osisi bara ụba na-esi isi.
A na-ekewa ifuru dị ọcha na tii mkpụrụ osisi na 4 flavors: Paris Champs, Blue Melancholy, Unrestrained Lover, Purple House Magic Medicine, ha niile nwere uru nke ha na ụwa ahụike.
Ihe a na-akpọ ifuru nectar tii sitere na mkpụrụ osisi na okooko osisi na epupụta nke ọgwụ ndị China dị ka isi ihe, nke kwesịrị ekwesị maka rhizomes na ọgwụ ndị ọzọ China. Ọ dị ọhụrụ na nke okike, ahụike, na-adịghị egbu egbu na mmetụta dị egwu.